साम्यवादको मूल तत्व विनयपिटक कि मार्क्सवाद? | Nagarik News - Nepal Republic Media
४ भाद्र २०७४ ३७ मिनेट पाठ
अध्यक्षज्यू, श्रद्धेयगण, महिला तथा सज्जनवृन्द!
मलाई माफ गनर्ुुहोला किनभने यो सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आएर मैले यसका सबै सभा–समारोहमा सहभागी हुन सकिनँ, जसरी एउटा प्रतिनिधिले सहभागी हुनुपर्ने थियो। म शारीरिक रूपमा अति सिकिस्त मान्छे हुँ। म यो सम्मेलनका सभा–समारोहका तनाव र बोझ सहन असमर्थ छु। यो सम्मेलनप्रति अनास्था भएर म अनुपस्थित भएको होइन। मेरो व्यक्तिगत अवस्थाले यो सम्मेलनका सभा–समारोहलाई मैले न्याय गर्ने नसकेको हो। सायद यो सम्मेलनमा मेरो अनुपस्थितिकै कारणले होला, मलाई यो मन्तव्यका लागि अनुरोध गरिएको छ। मैले स्वीकारेँ, तर यहाँ पनि मलाई छक्क पारिएको छ। मलाई यहाँ बोल्नुपर्छ भनेर खासै राम्ररी जानकारी थिएन। तर पनि कुन विषयमा बोल्ने भनेर मलाई सोधियो। मैले 'बुद्ध धर्ममा अहिंसा' भन्ने विषय भनेँ। तर, सहभागीमध्ये बहुसंख्यकले के इच्छा गरेका रहेछन् भने मैले 'बुद्ध धर्म र साम्यवाद'बारे बोलूँ। यस विषयमा मैले साधारण सभामा, पहिलो साधारण सभामा, प्रसंगवश हल्का संकेत गरेको थिएँ।
कम्युनिस्टहरूले साम्यवाद ल्याउन अवलम्बन गरेको साधन दुःखको स्वीकारोक्ति हो, निजी सम्पत्तिको उन्मूलन हो। र, यसको बाटो चाहिँ हिंसा र विपक्षीहरूको हत्या हो। यहीँ छ, बुद्ध र कार्ल मार्क्सबीचको आधारभूत भिन्नता। मान्छेलाई आफ्नो सिद्धान्त अँगाल्न लगाउने बुद्धको तरिका भने उत्प्रेरणा हो, नैतिक शिक्षा हो र प्रेम हो। शक्तिद्वारा होइन, प्रेमद्वारा सबै चीज जित्न सकिन्छ।
अब मलाई विषयमा जाने अनुमति दिनुस्। साम्यवादको सिद्धान्त के हो? यो केबाट सुरु हुन्छ? संसारमा शोषण छ, धनीले आफ्नो स्वामित्व कायम गरेको सम्पत्तिको कारणले गरिबलाई शोषण गरेेका हुन्छन्, तिनले आम मान्छेलाई दास बनाएका हुन्छन्, र त्यो दासत्वले पीडा, दुःख र गरिबी निम्त्याउँछ भन्ने सिद्धान्तबाट साम्यवाद सुरु हुन्छ। यही कार्ल मार्क्सको प्रस्थान विन्दु हो। उनले 'शोषण' शब्द प्रयोग गरे। के हो त कार्ल मार्क्सले दिएको उपचार? कार्ल मार्क्सले दिएको उपचार हो, एउटा वर्गको गरिबी र पीडाको व्यवस्थापन गर्न निजी सम्पत्ति समाप्त पार्नु जरुरी छ। कसैले पनि निजी सम्पत्ति राख्न पाउनु हुँदैन, किनभने निजी सम्पत्तिका मालिकले श्रमिकले उत्पादन गरेको — कार्ल मार्क्सले प्रयोग गर्ने प्राविधिक शब्दमा भन्ने हो भने — अतिरिक्त मूल्य हडप्छ, र श्रमिकले आफूले उत्पादन गरेको अतिरिक्त मूल्य पाउँदैन; यो मालिकले हडप्छ।
अब मलाई एकछिन बुद्ध धर्ममा जान अनुमति दिनुस् र मार्क्सले उठाएका बुँदामा बुद्धले के भनेका छन् भन्ने हेर्न दिनुस्। अघि भनेझैँ, कार्ल मार्क्स गरिबमाथि भएको शोषणको कुराबाट सुरु गर्छन्। बुद्ध के भन्छन् त? उनी कसरी सुरु गर्छन्? उनले आफ्नो धर्मको संरचनालाई उभ्याएको धरातल के हो? बुद्धले २ हजार वर्ष वा कम्तीमा २४ सय वर्षअघि ठ्याक्कै त्यही कुरा भनेका थिए। उनले भनेका थिए, संसारमा 'दुःख' छ। उनले 'शोषण' शब्दको प्रयोग गरेनन्, तर उनले 'दुःख'लाई आफ्नो धर्मको आधार बनाए — संसारमा 'दुःख' छ। निःसन्देह रूपमा, यो 'दुःख' शब्दलाई धेरै तरिकाले अर्थ्याइएको छ। यसलाई पुनर्जन्मका रूपमा, जीवन र मृत्युको चक्र (भवचक्र) भनेर पनि अर्थ्याइएको छ — यो 'दुःख' हो। म यसमा सहमत छैन। मेरो विचारमा, बुद्ध साहित्यमा यस्ता धेरै ठाउँ छन् जहाँ बुद्धले 'दुःख'लाई गरिबीका अर्थमा प्रयोग गरेका छन्। त्यसैले, जहाँसम्म आधारको कुरा छ, त्यसमा कत्ति पनि भिन्नता छैन। बुद्धवादीले त्यो आधार खोज्न कार्ल मार्क्सकहाँ जान आवश्यक छैन। त्यो आधार पहिल्यै यहाँ बनेको छ, राम्ररी बनेको छ, राम्ररी बनेको छ। बुद्धले आफ्नो दीक्षाबारे दिएको पहिलो प्रवचन हो — धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्त। त्यसैले, जो कार्ल मार्क्सप्रति आकर्षित छन्, तिनलाई म भन्छु — धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्त पढ्नुस् र बुद्धले के भनेका छन्, पत्ता लगाउनुस्। र तपाईंले यो प्रश्नको चित्तबु‰दो उत्तर पाउनुहुने छ। बुद्धले आफ्नो धर्मको आधार कुनै ईश्वरमा वा आत्मामा वा कुनै अलौकिक कुरामा अड्याएका होइनन्। उनले मान्छेले जीवनमा भोग्ने कष्टदायक अवस्थातिर औँल्याएका छन्। त्यसैले, जहाँसम्म मार्क्सवाद वा साम्यवादको सरोकारका विषय छन्, ती बुद्ध धर्ममा पुग्दो मात्रामा छन्। बुद्धले यो कुरा मार्क्स जन्मनुभन्दा २ हजार वर्षअघि नै भनेका थिए। सम्पत्तिको सवालमा, तपाईंले फेरि बुद्धको मत र कार्ल मार्क्सले प्रचार गरेको मतमा केही सामीप्य पाउनुहुन्छ। कार्ल मार्क्सले भनेका छन्, शोषण रोक्न राज्यले उत्पादनका साधनको — सम्पत्तिको — स्वामित्व लिनुपर्छ। जमिन राज्यको हुनुपर्छ, उद्योगधन्दा राज्यको हुनुपर्छ, ता कि श्रमिकको आफ्नो श्रमबाट पाउने मूल्यमाथि कुनै निजी सम्पत्तिका मालिकले हस्तक्षेप गरेर मजदुरबाट उसको मूल्य हत्याउन नपाओस्।
अब हामी संघतिर, बौद्ध संघतिर जाऔँ र बुद्धले भिक्षुहरूको जीवनका लागि बसालेका नियमलाई केलाऔँ। बुद्धले बसालेका ती नियम के–के हुन्? बुद्धले के भनेका थिए भने कुनै पनि भिक्षुले निजी सम्पत्ति राख्न पाउनेछैन। एक आदर्शको रूपमा भन्दा, कुनै पनि भिक्षुले निजी सम्पत्ति राख्न सक्दैन। यसमा कहीँ–कतै केही त्रुटि नभएको पनि होइन। मैले के पाएको छु भने केही देशमा भिक्षुले पनि निजी सम्पत्ति राखेका छन्। तथापि, बहुसंख्यक देशमा भिक्षुको कुनै निजी सम्पत्ति छैन, कत्ति पनि छैन। वास्तवमा, रूसमा साम्यवादीहरूले बनाएका नियमभन्दा बौद्ध संघका नियम धेरै नै कडा छन्। मैले यसलाई एउटा मौन विषयको रूपमा लिएको छु, यसबारे कसैले छलफल गरेको छैन, र यसबारे कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन। बुद्धले संघ बनाउनुको के उद्देश्य थियो? उनले यसो किन गरे? इतिहासतिर अलिकति फर्कने हो भने बुद्ध आफ्नो धर्म–प्रचारमा लागेकै बेला 'परिव्राजक'हरू क्रियाशील थिए। बुद्धभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै हामीले अहिले भन्ने गरेका सन्यासी वा भिक्षुका रूपमा ती अस्तित्वमा थिए। 'परिव्राजक' शब्दको अर्थ हो विस्थापित व्यक्ति, जसले आफ्नो घरबार त्यागेको हुन्छ। सायद आर्य कालमा, आर्यहरूबीचका विभिन्न जाति एक आपसमा लडाइँ गरिरहेका थिए। टुक्रिएका केही जातिले आफ्नो टिक्ने भूमि गुमाए र तिनीहरू भौँतारिँदै थिए। र तिनै भौँतारिएकाहरूलाई परिव्राजक भन्ने गरिन्थ्यो। बुद्धले गरेको ठूलो सेवा के थियो भने उनले ती परिव्राजकलाई एउटा समूहमा संगठित गरे र जीवनका नियम दिए, जुन विनयपिटकमा संगृहीत छन्। ती नियमअनुसार भिक्षुका लागि निजी सम्पत्ति जोड्न बन्देज लगाइएको छ। भिक्षुले सात वटा मात्र वस्तु राख्न पाउँछन्ः छुरा, पानी खाने लोटा, भिक्षापात्र, तीनवटा चीवर, र लुगा सिउने सियो। अब, म जान्न चाहन्छु, साम्यवादको मूलतŒव निजी सम्पत्तिको इन्कार हो भने, निजी सम्पत्तिको सम्बन्धमा विनयपिटकमा पाइएको नियमभन्दा ठूलो र कडा नियम अरू केही हुन सक्छ? सक्दैन, मैले चाहिँ योभन्दा कडा नियम थाहा पाएको छैन। त्यसैले, निजी सम्पत्ति हुनु हुँदैन भन्ने साम्यवादी व्यवस्थामा भएको नियमप्रति कुनै मान्छे वा कुनै युवा आकर्षित हुन्छ भने, उसले त्यही नियम बुद्ध धर्ममा पाउन सक्छ। प्रश्न के मात्र हो भने निजी सम्पत्तिको बन्देजको यो नियमलाई कति हदसम्म सिंगै समाजमा लागू गर्न सकिन्छ। तर त्यो व्यावहारिक रूपमा लागू हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा समय, परिस्थिति र मानव समाजको विकासमा भर पर्छ। जहाँसम्म सिद्धान्तको कुरा छ, के निजी सम्पत्तिको उन्मूलन गर्नु कुनै गल्ती हो? कोही त्यस्तो गर्न चाहन्छ भने बुद्ध धर्म उसको बाटोमा तगारो भएर उभिँदैन, किनभने यसले पहिल्यै बौद्ध संघको गठनबाट यस्तो छूट दिइसकेको छ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, कुनै बौद्ध देशमा धम्ममा कुनै संकट उब्जियो भने त्यसको दोष भिक्षुहरूकै थाप्लोमा जान्छ। किनभने मलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ भने उनीहरूले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन्। खै कहाँ भइरहेको उपदेशको प्रचारप्रसार? कसले अरूलाई बुद्ध धर्मको प्रचार गर्छ? भिक्षु त आफ्नै विहारमा भोजन गर्दै होला, निःसन्देह एक छाक मात्रै, त्यो पनि शान्तसँग। सायद ऊ पढ्दै होला, अझ हुन सक्छ म उसलाई सुतिरहेको पाउँछु, र साँझ अलिकति संगीत सुन्दै गरेको पाउँछु। धर्म फैलाउने तरिका यो होइन। मेरा मित्रहरू, म तपाईंहरूलाई भन्न चाहन्छु, म कसैलाई आलोचना गर्न चाहन्नँ। तर धर्म समाजको पुर्नजीवनका लागि नैतिक बल हो भने तपाईंहरूले मान्छेका कानमा यसलाई निरन्तर संचार गरिरहनुपर्ने हुन्छ। एउटा बच्चाले विद्यालयमा कति वर्ष बिताउनुपर्छ? एक दिन सिकेपछि बच्चाको ज्ञान वृद्धि हुन्छ भनेर तपाईंले उसलाई विद्यालय पठाउनुहुन्न। शिक्षा पाउन त बच्चाले दिनदिनै विद्यालय जानुपर्छ, पाँच घण्टा त्यहाँ बस्नुपर्छ, र निरन्तर अध्ययन गर्नुपर्छ। यसरी र यसपछि मात्र त्यो बच्चा केही परिपूर्ण हुन्छ, जसलाई ज्ञान वा सिकाइ भनिन्छ। यहाँका सबैलाई थाहा छ, बौद्ध विहार कुनै राज्य होइन। भिक्षुले मान्छेहरूलाई कुनै दिन पनि विहारमा बोलाउँदैन र नैतिक शिक्षाको विषयमा प्रवचन पनि दिँदैन। मैले यस्तो गरेको दृश्य कहिल्यै देखेको छैन। म श्रीलंका गएँ। त्यहाँ केही मान्छेलाई भनेँ, म भिक्षुले प्रवचन गरेको देख्न आतुर छु। उनीहरूले मलाई भने, उनीहरूसँग 'भर्ण' छ। उनीहरू 'भर्ण' शब्द प्रयोग गर्छन्, जसको अर्थ मैले 'वणका' हो भनेर पछि थाहा पाएँ। उनीहरूले मलाई ११ बजे एउटा ठाउँमा लगे, जहाँ यो जस्तै एउटा सानो वर्गाकार कोठा थियो, एउटा टेबुल थियो, र म भुइँमा बसेँ। त्यहाँ शिरपोसमा क्रस भएको एक भिक्षु ल्याइए। धेरै पुरुष र महिलाले पानी ल्याए र मेरा खुट्टा धोए, र उनी आए र त्यहाँ बसे। उनीसँग एउटा 'पंखा' थियो। हेर्नुस्, भगवान् मात्रै जान्दछ उनले के के भने। अवश्य, उनले सिंहाली भाषामा प्रवचन गरेको हुनुपर्छ। प्रवचन दुई मिनेटभन्दा लामो थिएन। दुई मिनेटपछि उनी बिदा भए।
तपाईं क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूको चर्चमा जानुहुन्छ। त्यहाँ के हुन्छ? प्रत्येक हप्ता मान्छेहरू त्यहाँ जम्मा हुन्छन्। उनीहरू पूजा गर्छन्। कुनै पादरीले त्यहाँ उपस्थित मानिसहरूबीच मान्छेले यो यो गर्नुपर्छ भनेर जिससले भनेका थिए भनेर बाइबलको आधारमा कुनै विषयमा प्रवचन दिन्छन्। तपाईं सायद छक्क पर्नुहोला, हामीमध्ये धेरै अचम्मै हुन्छौँ पनि, किनभने क्रिश्चियन धर्मका ९० प्रतिशत कुरा बुद्ध धर्मबाट सारिएका छन्, सार र रूप दुवैमा। तपाईं रोम जानुहुन्छ, मुख्य चर्च देख्नुहुन्छ, र तपाईंलाई बेरुतमा रहेको 'विश्वकर्मा' भनेर चिनिने ठूलो मन्दिरको सम्झना आउँछ।
प्रकाशित: ४ भाद्र २०७४ १०:०९ आइतबार
साम्यवादको मूल तत्व विनयपिटक कि मार्क्सवाद